25 Ntughari Uri Nri Healthy - Ọdịmma
25 Healthy eri Quotes na-akpali gị Mee Better Choices
25 Healthy Eating Quotes Motivate You Make Better Choices
Dị ka anyị chọrọ iji mee nhọrọ nri dị mma, ọ nwere ike isiri gị ike ịrapagidesi ike na nri kwesịrị ekwesị mgbe nkasi obi na ịdị mfe nke nhọrọ ndị na-enweghị omume ọma gbara gburugburu-oge niile jọgburu onwe ya. Maka mkpali, gụọ ma cheta usoro iri nri iri abụọ na ise a. Mgbe ahụ, iji nyere gị aka iru ebumnuche ndị ahụ, anyị etinyela ndụmọdụ ole na ole dị mfe maka ịme nhọrọ ka mma na nri anọ ndị ọkachamara kwadoro ka ị gbalịa, ọ bụrụ na ị na-achọ ime mgbanwe mana ị maghị ebe ị ga-eme malite.
Njikọ : Anyị jụrụ 3 Nutritionists for their Best Healthy Gut Tip… Ha Ha Kwuru Otu Ihe
1. Si n’osisi puta, rie ya; emere na akuku, don''t. - Michael Pollan, onye edemede na onye nta akụkọ
2. Ọ bụ ahụ ike bụ ezigbo akụ na ụba ma ọbụghị ọla edo na ọla ọcha. - Mahatma Gandhi, onye ọkaiwu na onye ọchịchị na-emegide ọchịchị
3. Mgbe nri adịghị mma, ọgwụ abaghị uru. Mgbe nri dị mma, ọgwụ adịghị mkpa. - Ayurvedic Ilu
4. Ọ bụrụ n’ichebe ezigbo nri na ngwa nju oyi gị, ị ga-eri ezigbo nri. - Errick McAdams, onye na-enye ọzụzụ onwe ya
5. Dọkịta nke ọdịnihu agaghịzi eji ọgwụ agwọ ọrịa mmadụ, kama ọ ga-agwọ ma gbochie ọrịa site na nri. - Thomas Edison, onye mmewe ihe na ọchụnta ego
6. Ndo, e nweghị mgbaasị majik. Ga eri nri gbasiri ike ma dịkwa mma iji nwee ahụike ma dị mma. Ọgwụgwụ akụkọ. - Morgan Spurlock, onye na-ede akwụkwọ, onye na-eme ihe nkiri na onye na-emepụta ihe
7. Ka nri bụrụ ọgwụ gị, ọgwụ gị ga-abụ nri gị. - Hippocrates, Ochie Greek dibịa
8. Iji dobe ahụ na ahụ ike bụ ọrụ, ma ọ bụghị ya, anyị agaghị enwe ike ime ka uche anyị sie ike ma doo anya. - Buddha, ọkà ihe ọmụma na onye nkụzi ime mmụọ
9. Ibu n’uche. Enyemaka obere. Ihe nlele ntakịrị ihe niile. Ihe ndị a bụ ihe nzuzo nke obi ụtọ na ezi ahụike. '' - Julia Child, onye edemede akwukwo na omume TV
10. Akụnụba mbụ bụ ahụ ike. '' - Ralph Waldo Emerson, onye edemede edemede, onye nkuzi na onye na-ede uri
11. I nwere ike lụọ ọgụ karịa otu oge iji merie ya. '' - Margaret Thatcher, onye bụbu Mịnịsta Ala nke UK
12. Rie nri ụtụtụ dịka nke eze, rie nri ehihie ka onye isi, rie nri abalị ka onye ogbenye. '' - Adelle Davis, onye edemede na onye na-edozi ahụ
13. Nri gị bụ akaụntụ akụ. Ezigbo nhọrọ nri bụ ezigbo itinye ego. - Bethenny Frankel, eziokwu T. mmadụ na onye ọchụnta ego
14. Nri kwesịrị ekwesị bụ ọdịiche dị n’etiti inwe ike gwụrụ na inweta ọtụtụ ihe na mgbatị ahụ. - Summer Sanders, onye na-akọwa egwuregwu na onye mbu na-egwu mmiri Olympic
15. Imega bụ eze. Nutrition bụ eze nwanyị. Tinye ha ọnụ ma ị nweela alaeze. '' - Jack LaLanne, ọkachamara n'ihe banyere ahụike na ihe oriri na njirimara T.V.
16. Ihe ịga nke ọma bụ nchikota nke obere mbọ, kwa ụbọchị na ụbọchị. - Robert Collier, onye edemede
17. Iji hụ na ezi ahụike: rie nri, fechaa ume, bie ndụ nwayọ, zụlite anụrị ma nwekwaa mmasị na ndụ. - William Londen, onye na-ere akwụkwọ na onye na-ede akwụkwọ ọgụgụ
18. Ana m anwa ịnọpụ n’echiche nke chọrọ idozi onwe m. M na-eme ihe ọ bụla masịrị m. '' - Taylor Schilling, onye na-eme ihe nkiri
19. Njem otu puku kilomita ga-eji otu ukwu amalite. '' - Lao Tzu, ọkà ihe ọmụma na onye edemede
20. Iri ezi ahu ike abughi iguta gram abuba, iku nri, asacha na antioxidants; ọ bụ banyere iri nri na-akpaghị aka site na ụzọ anyị si ahụ ya na okike n'ụzọ ziri ezi. - Pooja Mottl, onye edemede na ụmụ nwanyị''s na-akwado
21. Lekọta ahụ gị. Ọ bụ naanị ebe ị ga-ebi. `` - Jim Rohn, onye edemede na ọkà okwu na-akpali akpali
22. Ọ bụrụ na ị họrọ nke dị mma karịa akpukpọ ahụ, ị ​​na-ahọrọ ịhụ onwe gị n’anya karịa ikpebiri onwe gị ihe. - Steve Maraboli, onye edemede, akparamaagwa na onye ochie
23. Iri ezigbo nri na-ejuputa n’ahu gị n’uche na ihe na-edozi ahụ. Were ya na mkpụrụ ndụ gị na-amụmụrụ gị ọnụ ọchị ma na-asị: ‘I meela!’ - Karen Salmansohn, onye na-ese ihe na onye na-enyere onwe ya aka
24. Ahụ ike dị ka ego. Anyị enweghị ezi echiche banyere uru ya ruo mgbe anyị ga-atụfu ya. '' - Josh Billings, onye edemede ọchị na onye nkuzi
25. Ahụ gị abụghị ụlọ nsọ, ọ bụ ogige ntụrụndụ. Nwee ịnya ịnya. '' Anthony Bourdain, onye isi nri, onye edemede na onye njem njem
Zọ Dị Mfe Iri Ahụ Ike
Ugbu a ị nwetarala mkpali niile ịchọrọ iji rie nke ọma, ka anyị kwuo ndụmọdụ bara uru. N’ebe a, ndụmọdụ asatọ dị mfe iji setịpụ gị maka ọganiihu na-eri nri siri ike.
1. Esi nri nke gị
O doro anya, ọ na-eri oge, mana ịme nri nke gị kama ịpụ iri nri bụ ụzọ kachasị dị mfe iji rie ahụike (yana ego, chekwaa ego). Lọ oriri na ọrantsụrantsụ na-ebuju efere ha na shuga, nnu na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. Na mgbakwunye, oke oke na-abụkarị oke. Isi nri n'ụlọ na-eme ka ị mata na ị maara kpọmkwem ihe na-abanye n'ime nri gị, na-enye gị njikwa dị mma karịa ole ị na-eri nri ma na-emekarị nri fọdụrụnụ iji weta nri ehihie n'echi ya.
stylesdị ntutu isi maka ụmụ agbọghọ
2. Jiri Uche Na-eri Ihe
Kere ya: ’re nọ ọdụ n'ihu TV na nnukwu nri abalị ị na-eri nri pụtara na ị gbasaa nri abụọ. ’Re banyela kpamkpam na akụkọ kachasị ọhụrụ nke Bachelor , na tupu ị mara ya, ị ga-eji akọ na-akọ ihe niile ị na-eme. Iji zere iri oke nri n'amaghị ama, gbalịa ịdị na-eri nri nke ọma, nke pụtara na ị ga-anọ n'oge ahụ ka ị jiri nwayọ rie nri. Ọ na-emekwa ka nri iri nri bụrụ ezigbo ahụmịhe na-adịghị enye nrụgide.
3. Ekwe ka Onwe Gị
Mgbe ị na-eri obere obere ụbọchị niile, o yikarịghị ka ị ga-abụ onye agụụ na-eri nri n'oge nri ọdịnala. Ma mgbe anyị kwuru nri, anyị na-ekwu nhọrọ ahụike, ndị mmadụ. Nke a bụ nri itoolu na-ehichapụ ụbọchị niile nke na-agaghị emebi nri gị mana ọ ka ga-eme ka ị gbaa egbe niile.
4. Kwụsị ịloụ kalori gị
Mgbe anyị chere ihe ndị na - eme anyị ka anyị jigide na pound buru ibu, anyị na - echekarị maka achicha na mpekere na french fries. Anyị na-elegharakarị calorie (na shuga) dị na mmanya ndị anyị na-a weụ anya. Idebe pound na-enweghị ịgụ nwa ehi, belata soda (nri oge niile na nri), ihe ọ drinksụ coffeeụ kọfị mara mma na mmanya. Anyị maara na ichi caramel macchiato bụ ọnwụnwa, mana gbalịa zụọ onwe gị ịhọrọ kọfị ojii.
kacha mma jeans maka ụmụ nwanyị toro ogologo
5. Nọrọ na mmiri
Drinkingnọgide na-a drinkingụ mmiri bụ otu n'ime ihe kachasị mma ị ga - eme maka ahụike gị yana otu kachasị mfe. Na mgbakwunye na ị na-eme ka akpụkpọ gị doo anya na ume gị, ịnọ na-arụ ọrụ hydrated na-eme ka ahụ gị dị ike, na-eme ka ị nwee afọ ojuju (kwa a Ọmụmụ ihe 2015 si Mahadum Oxford ) ma gbochie gị ị drinkingụ nnukwu mmanya ndị ahụ anyị kwuru n’elu.
6. Ekpalila Nri
Kama ịkwụghachi onwe gị ụgwọ maka ịkụ mgbatị ahụ ụbọchị atọ n'usoro na Pizza na milkshake (nke na-egbochi ọrụ ị na-etinye na igwe kwụ otu ebe), nweta ịkpụ aka ma ọ bụ zụta akwụkwọ ọhụụ ị na-ele anya.
7. Ihi ụra zuru ezu
edozi isi dị mfe maka ntutu ntutu isi site na nkwụsị
Dị ka anyị, ọ nwere ike bụrụ na ị na-enwekarị nsogbu karịa ka ị na-ehi ụra zuru oke, mana ị maara na ike gwụrụ gị nwere ike ịkọwa ọdachi maka ebumnuche ọnwụ gị? Ọmụmụ ihe-dị ka Nke a bipụtara na Akwụkwọ nke Nọọsụ Nọọsụ —Gosiputara na enweghi ura nwere ike ime ka agu na agu ya, ma mekwa ka ibu rite site na ichighari na homonụ ghrelin na leptin
8. Nwee Ndidi
Emeghị Rome na otu ụbọchị, ibu anaghị ada n'ahụ gị mgbe ị risịrị otu salad. Y’oburu na ibu ibu bu ebum n’uche gi, odi nkpa inwe obi oma n’ebe gi na aru gi no. Nwere ike ịbụ onye tụfuru ibu na nkedo nke okpu, mana ị nwere ike ọ bụghị, nke ahụ dịkwa mma. Ghichaa onwe gi ma ghara ịkwụsị mgbe, mgbe otu izu gachara, ị naghị adị ka nwanne nwanyị Hadid.
4 Diets nke na-arụ ọrụ n'ezie ... Dị ka ndị ọkachamara si kwuo
1. Osimiri Mediterenian
Ihe nri Mediterenian dabere na nri dum sitere na osisi, tinyere akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, yana ọka niile, mkpo na mkpụrụ, yana obere ngwaahịa anụmanụ (ọkachasị nri mmiri). A na-eji mmanụ oliv nwere ezi obi dochie bọta, anụ uhie na-ejedebe karịa karịa ugboro ole na ole n'ọnwa, soro ndị ezinụlọ na ndị enyi rie nri, a na-ahapụkwa mmanya (na imeru ihe). Nnyocha na-egosi na ụdị nri a na-eme ka ahụike obi nwee ike jikọtara ya na mbelata ọnwụ nke obi obi, ụfọdụ ọrịa kansa, ụfọdụ ọrịa na-adịghị ala ala na ọnwụ mmadụ niile. Extra ego? Ọ dịkwa mfe iri ụzọ a n'ọtụtụ ụlọ nri. - Maria Marlowe , integrative oriri na-edozi ahụ ike nchịkwa na-ede akwụkwọ nke Ezigbo nri nri nri
2. Nri Flexitarian
Ngwakọta nke okwu mgbanwe na onye anaghị eri anụ , nri a na - eme nke ahụ — ọ na - enye gị ohere ime mgbanwe na ụzọ ị ga - esi na - eri anụ. Nri ahụ na-agba ndị mmadụ ume ịgbaso usoro nri sitere na osisi mana ọ naghị ekpochapụ ngwaahịa anụ kpamkpam (kama, ọ na-achọ ibelata anụ na nri abụba jupụtara). Ọ bụ ụzọ dị mma iji rie ọtụtụ mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, mkpụrụ na mkpo, nke dị mkpa maka ahụike zuru oke, ma na-enyekwa ụzọ dị mma maka ịga nke ọma ogologo oge. - Melissa Buczek Kelly, edebanyere aha
3. Osisi-Dabere Paleo (aka Pegan)
Dika nri ndi Mediterenian na ekwusi ike ya na nri ndi esiri esi, paleo nke sitere na osisi na ewere ya ozo site na iwepu mmiri ara ehi, gluten, nke oma na mmanu akwukwo nri. Ọ bụ ezie na paleo kwụ ọtọ na-ewepụkwa ọka na agwa / mkpo, ụdị a na-enye ha ohere ntakịrị. Tụgharị anya n'otú ị si ele anụ anya (ọ bụghị dị ka isi nri kama dị ka nri ma ọ bụ nri n'akụkụ kama), iwepu nri ndị a haziri nke ọma ma nụchaa, na itinye mesie ike na veggies dị ka kpakpando nke efere nwere ike inyere aka belata nsogbu anyị nwere ọrịa obi ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala. Ọ na - enyere aka n’ibu ọnwụ ma na - edobe ahụ dị ike n’elu ogologo oge. - Maria Marlowe
4. Nordic Diet
ọgwụgwọ ụlọ maka oke ntutu ọdịda
Nordic diet nwekwara nyocha banyere uru ahụike, gụnyere agbada mbufụt na ihe ize ndụ maka ọrịa obi . Ọ na-emesi ike ịre azụ (nke dị elu na omega-3 fatty acids), ọka zuru oke, mkpụrụ osisi (ọkachasị mkpụrụ osisi) na akwụkwọ nri. Dị ka nri Mediterenian, nri Nordic na-egbochi nri esichara, ụtọ na anụ uhie. Nri a na-ekwusi ike na mpaghara, nri oge a na-enweta site na mpaghara Nordic. N'ezie, ịchọta nri Nordic dị na mpaghara nwere ike ọ gaghị ekwe omume maka onye ọ bụla, mana enwere m mmasị n'echiche iri nri ndị ọzọ na mpaghara na iji ihe dị na mbara ala anyị. - Katharine Kissane, onye na-eri nri edebanyere aha
Njikọ : 8 obere mgbanwe ndị nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ibu arọ
otu esi akwụsị ntutu
Krismas carols maka ụmụaka
na-ekpo ọkụ ihunanya fim depụta Hollywood
ọgwụgwọ ụlọ maka ntutu isi na dandruff
edozi isi na obere ntutu